Indawo yokudlela yase-Toro Nero Steak House eMessina
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House - Messina
Ukunambitheka nekhwalithi kuhlanganiswe nesevisi engacacisiwe: Isiqinisekiso seToro Nero
4.3 /5 amavoti (amavoti angama-6)
Inkunzi emnyama, e Via La Farina 185 a Messina, kunjalo I-Ristorante, I-Pizzeria e Steak House phakathi kwamakilabhu ehlelo leDolobha LaseStrait. Sibonga u Amakhono Inyama, okuhle kakhulu Pizza kuphekwe ngaphakathi I-oveni yokhuni, imenyu enkulu nenambithekayo kanye nensiza enhle kakhulu, Inkunzi emnyama è I-Ristorante, I-Pizzeria e Steak House ilungele ukujabulela izitsha ezimnandi endaweni eyamukelayo nenethezekile. Ngaphezu kwalokho, iyindawo ekahle yakho Eventi.
Indawo yokudlela yase-Toro Nero Steak House eMessina - Indawo yokudlela kanye nePizzeria
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House, esikhungweni a Messina, ivelele ubuhle nokunambitheka kwezitsha ezilungiselelwe ngabapheki bezinga eliphakeme ngezithako ezisezingeni eliphakeme nangokuhlonipha ngokuphelele imithetho eyisisekelo yenhlanzeko nokuphepha. Imenyu ebanzi ye izifiso zokudla, kuqala e imizuzwana I-Piatti e Dessert, ujoyina ukukhetha okuhle kweziphuzo kanye ne Uhlu lwewayini kuyahlonipha. The isevisi abasebenzi abangahlelekanga Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House unaka futhi ulungiselelwe, uzokuhambisa ngamakhasi futhi akusize ukhethe kumenyu, ekululeka ngokunakekela nangehlonipho.
Zama okungcono kakhulu Pizza kulungiselelwe ngezithako ezisezingeni eliphakeme futhi kuphekwe ngokuqinile ngaphakathi I-oveni yokhuni. I-Pizzaioli ye Indawo yokudlela yase-Toro Nero e I-Pizzeria baziqhayisa ngolwazi olukhulu nekhono nemenyu ecebile ye Ama-pizza kulungiswe ngobuciko ngezinto ezinhle kakhulu zokusetshenziswa okuluhlaza: uhla lwe-flavour nokunambitheka okuzokushiya ungakhulumi. Uzothathelwa inketho. Zama okumnandi Pizza di Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House a Messina.
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House eMessina - Steak House
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House, e Via La Farina 185 a Messina, nsuku zonke Indlu Steak ulethe etafuleni I-Carne kokukhetha kokuqala kunqabile ezitsheni ezihlwabusayo ezilandela izindlela zokupheka kusuka kwesendabuko kuya kokuvamile kakhulu futhi okungashicilelwe. La Indlu Steak ingenye yefulegi le Inkunzi emnyama: il Ukunambitha kokuhle I-Carne della Indlu Steak di Inkunzi emnyama kungukubonga okuqinisekisiwe ekukhetheni ngokucophelela ukusikeka kokukhetha kokuqala nomsuka olawulwa futhi oqinisekisiwe. I Chef Staff onekhono futhi walungisa of the Toro Nero Steak House kupheka inyama kulandela izindlela zokupheka zendabuko nokugcina izinga eliphakeme kakhulu: ukupheka, kanye nezindlela zokupheka inyama, yinhlanganisela ejabulisayo Isiko nokwenziwa kwezinto ezintsha. Ngaphezu kwalokho, Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House yindawo yokudlela kuphela e Messina nge Igumbi lokubhema.
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House eMessina - Inhlangano Yemicimbi
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House, esikhungweni a Messina, indawo ekahle yakho imicimbi: Izinsuku zokuzalwa, izikhumbuzo, amaqembu wokuthweswa iziqu futhi noma ngubani onokuningi, beka okuningi! Ubumnene nekhono labasebenzi kuyisiqinisekiso esiqinisekisiwe sokuphumelela kuyo yonke imicimbi. Inkunzi emnyama, ngenxa yamakamelo amakhulu futhi anethezekile, uyakwazi ukukunikeza indawo ekahle eyakho imicimbi. Ngaphezu kwalokho, ikhwalithi ephezulu kakhulu yezitsha, i isevisi kuyenzeka futhi namandla okubhukha amaqembu amakhulu, kuyenza Indawo yokudlela yase-Toro Nero Steak House Enye yezindawo eziyintandokazi zeMessina ezabo imicimbi. Kusihlwa ngomphumela wempumelelo eqinisekisiwe, thembela kubungcweti nekhono le Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House a Messina.
Indawo yokudlela yaseToro Nero Steak House eMessina - Ikhwalithi neNkonzo Engacacile
Indawo yokudlela yase-Toro Nero Steak House, e Via La Farina 185 a Messina, uphakathi kwezindawo zehlelo ledolobha lase Strait, ngiyabonga amakamelo amakhulu futhi anethezekile, Abasebenzi babapheki abaqeqeshiwe nabaphezulu kakhulu nabapheki be-pizza Ikhwalithi yezitsha, ikumema ukuthi uzame i-cuisine yayo. Inkunzi emnyama kuyiqiniso elingadingi kungeniswa: zonke izinsuku etafuleni eliyigugu Indawo yokudlela yase-Steak House Pizzeria uzothola okuhle kakhulu izifiso zokudla, kuqala e Izifundo zesibili e Dessert, Pizza kulungiselelwe ngezithako ezisezingeni eliphakeme futhi kuphekwe ngokuqinile ngaphakathi I-oveni yokhuni, I-Carne kokukhetha kokuqala kunqabile ekuvuseleleni izindlela zokupheka. Ngaphezu kwalokho, Inkunzi emnyama iyindawo ekahle yakho imicimbi. Izinsuku zokuzalwa, ama-Anniversaries, amaqembu wokuthweswa iziqu: khetha isikhathi ngasinye Inkunzi emnyama a Messina.
Ikheli: I-Via La Farina, 185
I-POSTAL CODE: 98123
Ucingo: 090 2931640
Email: Sithinte kusuka lapha
Inombolo ye-VAT: 03124960836